असल राष्ट्र नेता थिए गजेन्द्र नारायण सिंह–महासचिव पटेल
You are at Home असल राष्ट्र नेता थिए गजेन्द्र नारायण सिंह–महासचिव पटेल
वीरगंज,३ बैशाख । मधेस आन्दोलनका प्रणेता एवं नेपाल सदभावना पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष स्व. गजेन्द्र नारायण सिंहको ८७ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा नेपाल सदभावना पार्टी पर्साले आज वीरगंजमा एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
पर्साका अध्यक्ष मनोज कर्णको अध्यक्षतामा पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागि पार्टीका नेता एवं कार्यकर्ताहरुले स्व. सिंहको तस्बिर माथि माल्र्यपन गरी नेता सिंहको बिचार एवं निती प्रति चर्चा गरेका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सदभावना पार्टीका महासचिव शिव पटेलले पंचायतकाल देखि नै नेपालका मधेसी ,आदिवासी,जनजाती तथा थारु समुदायहरु लाई राष्ट्रको मुलधारमा ल्याउन स्व. सिंहले गरेको अतुल्नीय योगदानलाई अधिकार प्रेमी जनताहरुले कहिल्य पनि नर्बिसने चर्चा गर्दै स्व. सिंहको सपना साकार गर्न जारी मधेस आन्दोलनलाई सफल बनाउन यस पार्टीका सम्पुर्ण नेता एवं कार्यकर्ताहरु ईमन्दारीका साथ लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । सम्बोधनकै क्रममा महासचिव पटेलले नेपालमा संघीयताको अवधारणा ल्याउने पहिलो नेताको रुपमा परिचित स्व. सिंह संबिधान सभाबाट संघीयता लागु भईसकेपछि अमर भएको चर्चा गर्दै स्व. सिंह साच्किै राष्ट नेताको रुपमा आफनो पहिचान छोडेको बताउनुभयो ।
नेपाल सदभावना पार्टी पर्साका सचिव कृष्णा पटेलले संचालन गर्नुभएको सो कार्यक्रममा नेपाल सदभावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्यद्वव संजय पाण्डे,अनिरुद्ध सिंह,नेता पप्पु पटेल ,नेपाल महिला मंचका केन्द्रिय उपाध्यक्ष मुनी श्रीवास्तव,पर्सा अध्यक्ष अनिता रौनियार लगायतका नेताहरुले स्व. सिंहको जिवनी माथी प्रकास पारेका थिए भने कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य पर्साका उपाध्यक्ष संतोष सर्राफले व्यक्त गर्नु भएको थियो ।